भारतबाट आएकाहरूलाई रुखमुनिको क्वारेन्टाइन ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/भारतबाट आएकाहरूलाई रुखमुनिको क्वारेन्टाइन !
काठमाडाैं। कपिलवस्तुमा भारतबाट आएकाहरूलाई खुला आकाशमुनि राखिएको छ। यशोधरा गाउँपालिका-८, मधुनगरामा गर्मीको मौसममा २३ जनालाई खुला आकाशमुनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। खुल्ला आकाशमुनि रुखको आडमा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेशकुमार पाण्डेयले जानकारी दिए। वडा नम्बर ८ मा रहेका तीनवटै विद्यालयमा बनाइएकाे क्वारेन्टाइन भरिएकाले उनीहरूलाई खुला आकाशमुनि राख्नु परेकाे पाण्डेयकाे भनाइ छ। उनीहरू एक सातादेखि त्यसरी नै बसिरहेको उनी बताउँछन्।
क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि विद्यालयहरूमा ठाउँ नहुँदा त्यसरी राखिएको भन्दै उनले खाली हुनेबित्तिकै व्यवस्थापन गरिने उनी बताउँछन्। “ठाउँ नै छैन त कहाँ राख्ने? ८ नम्बर वडामा रहेका तीनवटै स्कूल भरिएका छन्। अब स्कूलमा भएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण पछि घर पठाएर उनीहरूलाई राख्छौं।”, अध्यक्ष पाण्डेयले भने। अहिले यशोधारा गाउँपालिकाभरमा ८५० जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। भारतबाट आउनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले व्यवस्थापमा समस्या भइरहेको उनले बताए। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमध्ये केहीले १४ दिन पुरा गरिसकेका छन्।
“उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर पठाउन पाए हुन्थ्यो। तर, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सकिएको छैन”, उनले भने। स्थानीय सरकारले खोरमा बाख्रा हुले जसरी भारतबाट आउनेहरूलाई एकै ठाउँमा राख्नुपरेको भन्दै क्वारेन्टाइनबाट झन जोखिम बढेको उनको भनाइ छ। “स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टाइनमा राख मात्र भनियो। स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र सरकारले नै गर्दै आएको छ। तर, कहिलेसम्म यसरी थुनेर राख्ने ? कोरोना संक्रमण नभएकाहरूमा पनि सर्ने डर भयो”, अध्यक्ष पाण्डेयले भने।
प्रधानन्यायाधीसकाे राजीनामा माग, सर्वाेच्चमा हलचल